अभिनेत्री सुपुष्पाले गरिन् निर्माता रौनक विक्रमसँग इन्गेज्मेन्ट – bampijhyala.com
Home > समाचार > चलचित्र > अभिनेत्री सुपुष्पाले गरिन् निर्माता रौनक विक्रमसँग इन्गेज्मेन्ट
१५ बैशाख २०७८, बुधबार १२:४८ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । अभिनेत्री सुपुष्पा भट्टको निर्माता रौनकविक्रम कँडेलसँग इन्गेज्मेन्ट भएको छ । भट्ट र कँडेलको बुधबार इन्गेज्मेन्ट भएको फिल्म निर्देशक रामबाबु गुरुङले जानकारी दिए । केही समयको प्रेमलाई दुबैले अहिले विवाहमा परिणत गर्न लागेका हुन् । इन्गेज्मेन्ट समारोहमा दुबै तर्फमा नजिकका आफन्त र साथीभाई गरेर सिमित ब्यक्तिको मात्र उपस्थिति रहेको थियो ।
विवाहको मिति भने फाइनल हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
सुपुष्पा ‘रणवीर’ फिल्मबाट रजतपटमा डेब्यू गरेकी हुन् । ‘रणवीर’पछि उनले ‘छ माया छपक्कै’ र ‘चपली हाइट ३’ अभिनय गरेकी थिइन् । फिल्म ‘चपली हाइट ३’ भने प्रदर्शनमा आउँन बाँकी रहेको छ ।
रौनकबिक्रम फिल्म निर्माता हुन् । उनले ‘कबड्डी कबड्डी’ सहित रामबाबु गुरुङको निर्देशन रहेको केही फिल्म निर्माण गरेका छन् । रौनक र सुपुष्पाको प्रेमको विषयमा केही पहिले मिडियामा गसिप समेत बनेका थिए । सो समय दुबै मौन रहेका थिए ।
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल १५ बैशाख २०७८, बुधबार १२:४८
सम्झनामा जेठ ३ १५ बैशाख २०७८, बुधबार १२:४८
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? १५ बैशाख २०७८, बुधबार १२:४८
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव १५ बैशाख २०७८, बुधबार १२:४८
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १५ बैशाख २०७८, बुधबार १२:४८